Swipe Bulsheed: Khibrad Isticmaalaha Caqli badan ee Tabarucaadka Samafalka ah | Martech Zone
Swipe Bulsho: Khibrad Isticmaalaha Caqli badan ee Deeqaha Samafalka ah
Khamiis, May 22, 2014 Talaado, Maarso 22, 2016 Douglas Karr
Marar badan oo suuq-geynta ah, waa dhaqan weyn in la maro nidaamka beddelka, lana ogaado tallaabo kasta iyo dabeecad kasta, iyo fahamka xalalka la hirgelin karo si looga gudbo. Hay'adaha samafalka, waa kala-goynta udhaxeysa adeega shaqada qabanaya iyo waqtiga iyo goobta deeqda.
Xalkan ka yimid Misereor, ayaa Iskuxir Bulsho, waa xalka caqliga leh ee lagu xallinayo laba arrimood oo kala duwan:
Dadka kaliya ma sii wadaan lacag caddaan ah.
Sanduuqa ku deeqa ma bixinayo aragti ku saabsan waxa lagu dhammaystiray lacagta.
Geli Swipe Bulshada. Fiidiyowga ayaa la falgalaya kaarka deynta ee qofka lacagta ku deeqaya. Markay wax xoqayaan oo ay ku deeqayaan cuntada, jeex rooti ah ayaa la jarjaray. Ama markay wax xoqayaan oo ay ugu deeqayaan la dagaalanka tahriibinta dadka, silsiladaha gacmaha qof haysta way jabaan. Runtii xal layaableh.
Tags: deeqaha sadaqadaSadaqodhaqanka deeqdadeeqomarin habaabiyamari bulshada
Real-Time Ads Ads by Zapp360
Kaydinta: Muuqaalka Sheeko-muuqaal ee iPad-ka